Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu egwuregwu Czech Republic Tomas Soucek Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
Anyị Tomas Soucek Biography na-akọwa akụkọ banyere nwata, ndụ ya mbụ, nne na nna, ndụ ịhụnanya (enyi nwanyị, nwunye), Eziokwu ezinụlọ, ndụ onwe onye na ndụ ya. Na nkenke, ọ bụ nyocha zuru oke nke akụkọ ndụ ya malite na mgbe ọ bụ nwata rue mgbe ọ ghọrọ onye egwu bọọlụ.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye egwu na-agbatị agbatị ma na-agbachitere ma na-awakpo ya. Agbanyeghị, ọ bụghị ọtụtụ gụrụ Tomas Soucek's Biography nke nwere ezi nghọta. Ugbu a na-enweghị ọzọ ado, ka anyị malite.
Tomas Soucek's Child's Akụkọ:
Maka ndị akụkọ ndụ, ndị na-agba bọọlụ ka Petr Čech enyemaka sitere na Czech Republic. Tomas Soucek mụrụ na 27th ụbọchị nke February 1995 na obodo Czechia nke Havlíčkův Brod. A mụrụ Little Tomas nye ndị nne na nna ndị amabeghị aha ha n'oge edere akụkọ ndụ ya.
Tomas Soucek's Family sitere na:
Ekele dịrị ndị na-agba bọọlụ anya, na-ekwu okwu na aha ikpeazụ, enweghị ajụjụ ma ọ bụ obi abụọ banyere mba ọ mụrụ. Tụkwasị na nke a, mgbọrọgwụ ezinụlọ nke football gbara ọkpụrụkpụ na obodo a mụrụ ya - Czech Republic.
Tomas Soucek na-etolite Afọ:
Know maara na Soucek na-eto eto toro n'obodo ọmụmụ ya na Havlíčkův Brod? O toro na obodo, Soucek bụ onye ogologo karịa ndị ọgbọ ya. Ọ dịkwa nnukwu na ịgba ọsọ na ịgba bọl n'oge ọ dị obere.
Nzụ ezinụlọ Tomas Soucek:
Ọ dị mma ịmara na nne na nna Tomas Soucek bụ ndị nyere aka nyere ya aka n'ịhụnanya na ịgba ọsọ na ịgba bọl. N'ezie, mama mama Soucek bụ onye maara ọsọ marathon ebe nna ya bụ onye na-anụ egwuregwu football. Ha abụọ, nne na nna ahụ nyere Soucek ezigbo ụdị mmekọrịta a na-etolite na klas.
Otu ọrụ bọọlụ bidoro maka Tomas Soucek:
N'ịchọ izipu nwata ahụ mgbe ahụ ịga ụlọ akwụkwọ dị mma, nne na nna Tomas Soucek chọsiri ike ịgba mbọ hụ na ike ya na ịhụnanya ya maka ịgba ọsọ hụrụ ọzụzụ na klọb ime obodo - FC Slovan Havlíčkův Brod (2001-2004).
Ka ọ na-erule oge Soucek dị afọ 10, ọ malitere inye ọzụzụ SK Slavia Praha. Vllọ ahụ gbara ọtụtụ kilomita site na Havlíčkův Brod. Enweghị ekele dị anya, Soucek gara naanị ọzụzụ abụọ na egwuregwu kwa izu. O mechara chọta ebe n'ụlọ akwụkwọ football ma malite ọzụzụ oge niile.
N'afọ ndị mbụ Tomas Soucek na Ọrụ Nlekọta Ọrụ:
Ọ bụ na SK Slavia Praha ka Soucek nọrọ ọtụtụ afọ nke ọrụ ịgba bọl ya - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri n'etiti 2004 na 2014 - na-eme ka nkà zuo ezu ugbu a na-egosipụta ụdị egwuregwu ya.
Mgbe oge dị mma, onye na-eme egwuregwu bọọlụ nyere nnukwu ịkwaga Slavia Prague ebe ọ mere egwuregwu izizi ya ma nwee ọfụma nke egwuregwu bọọlụ nke mbụ. Agbanyeghị, ọ nweghị ike wusie ọnọdụ ya na ndị otu mbụ ike.
Tomas Soucek's Biography - Tozọ Iji Ama Akụkọ:
Ọ bụ obere oge tupu Slavia Prague malitere izipu Soucek na mbinye ego na klọb ndị ọzọ. Nke mbu bu Viktoria Žižkov ebe onye na-eto eto emeghi ihe ọ bula tupu ya alaghachi na klọb nne na nna ya.
N'oge oge 2016 - 17, Soucek kwụsịrị ọfụma na otu egwuregwu mbụ nke Slavia Prague wee gaa nye ego na Slovan Liberec n'oge windo mbufe. Agbanyeghị na onye ahụ kwụghachiri klọb nne na nna ya ka ha rụchaa ego ahụ, ma anabataghị nke ikpeazụ gbasara ịgbazinye ego ya.
Tomas Soucek's Biography - Bilie Fbụ Akụkọ Akụkọ:
Mgbe Soucek sonyeere ọdịda nke Premier League n'akụkụ West Ham na nkwekọrịta ịgbazinye ego na Jenụwarị 2020, ọrụ ya malitere na-aga n'ihu. Ọ bụ ezie na nkwekọrịta ahụ bụ Soucek nke mbụ na mpụga Czech Republic, ọ na-eme ngwa ngwa iji kwekọọ na bọọlụ Bekee ma nwee nnukwu mmetụta na ọwụwa anyanwụ London.
N’oge na-adịghị anya ọ ghọrọ onye ọkacha mmasị na-amasị ya wee gaa n’ihu nyere aka n'akụkụ ya ka ọ ghara ịdị na-agbapụta nkewa site na ịpịpị ma napụ ọtụtụ isi ihe. Ngwa ngwa n'oge edere, ọtụtụ ndị fans na-ahụ Tomas ka ọhụụ Pavel Nedved.
Ndị hụrụ bọọlụ n'anya agaghị eche ka ha nwee onye agbachitere agbachitere bịanye aka na West Ham na-adịgide adịgide maka ọtụtụ oge o nyere ndị klọb ahụ maka ịlanarị nnukwu nkwalite. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Banyere Tomas Soucek Nwanyị na ụmụaka:
Soucek so na enyi ya nwanyị Natalia na-enwe obi ụtọ. Ihe amaghi ihe banyere oge ima ima bidoro bidoro. Agbanyeghị, ha ejiela anya kemgbe ọtụtụ afọ tupu ọghapụ onye ọkpọ egwuregwu gbaga na West Ham.
Kpoo ezinaụlọ Tomáš Souček- Nwunye ya na nwaada nwanyị. : Instagram
The lovebirds nwere nwa nwanyị ọnụ. Aha ya bụ Terezka. Soucek hụrụ nwa ya nwanyị na nwa ya nwanyị n'anya. N'ihi ya, ọ na-eme ike ya niile ịtụle ihe ndị na-amasị ha mgbe ọ bụla ọ na-eme mkpebi dị mkpa gbasara ọrụ ya.
Ndụ ezinụlọ Tomas Soucek:
Dịka ọtụtụ ndị sto So Socecek bụ onye agọziri agọzi inwe ezinụlọ na-akwado ya. N'ebe a, anyị na-enye gị eziokwu banyere nne na nna Tomas Soucek, ụmụnne ya na ndị ikwu ya.
Zute Ezinụlọ Tomáš Souček. : Picuki
Banyere nna Tomas Soucek na mama ya:
Soucek enwechaghị ndị nne na nna. Ka o sina dị, anyị maara na mama ya nwere akụkọ ntolite bara ụba dị ka onye na-agba ọsọ marathon. N'aka nke ọzọ, nna ya nwere mmasị ịkụ azụ na football. O toro nne na nna a otuto maka ndị nke ha n'otu n'otu ka ha duo ya maka ọzụzụ. Ka a sịkwa ihe mere na ndị na-agba ụkwụ na-ewere ha gaa egwuregwu ọ bụla. Ọ na-agbakwa mbọ ike ime ihe ha tụrụ anya ya.
Banyere Tomas Soucek nwanne na ndị ikwu:
Soucek ekwuola na inwe nwanne ma ọ bụ nwanne mgbe ọ bụla o mere tufuo akụkọ ndụ ya n'oge a na-agba ajụjụ ọnụ. N'ihi ya, enwere ike bụrụ na ọ bụ naanị nwa mụrụ nne na nna ya. Banyere agbụrụ agbụrụ onye ikwu ya na ndị ikwu ya, amachaghị banyere nne na nna nna ya. N’otu aka ahụ, nwanne nna ya, nwanne nna ya, ụmụ nwanne ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne nne ya amabeghị.
Ndụ Nke Tomas Soucek:
Tomzọ Tomas Soucek nke nọ na olulu mara maka ịbụ onye agbachitere dị egwu na ihe mgbaru ọsọ, ihe ndị eziokwu na echiche ya banyere mmadụ ịpụ n'igwe apụtaghị ma nweekwa mmasị. Ndị Fans na ndị otu egwuregwu na-ekwupụta eziokwu ahụ bụ na ọ na-enwe mmetụta mmetụta uche, dị umeala n'obi na okike.
Onye egwuregwu bọọlụ na-adọrọ mmasị nke ihe ịrịba ama Zodiac bụ Pisces na-eme ọtụtụ oge na-agafe maka ọdịmma ya na egwuregwu ya. Ha gụnyere ige egwu, igwu mmiri, ịga hụ enwe (lee anya n'okpuru) na isoro ezinụlọ na ndị enyi na-anọrị.
Tomáš Souček Ezigbo Ndụ Eziokwu. : Instagram.
Ndụ Tomas Soucek:
Banyere otu Tomas Soucek si na-eme ma na-emefu ego ya, ọnụ ahịa ya na-enyocha dịka July 2020. Ka o sina dị, ọ dịghị agọnahụ eziokwu ahụ na ọ na-enweta ụgwọ ọrụ dị ukwuu na ụgwọ ọnwa site n'ịgba bọl elu.
Na mgbakwunye, ndị na-agba bọl agbachitere na-akpata ego dị egwu site na nkwenye ma ọ nweghị nsogbu ọ bụla ibi ndụ ntụsara ahụ nke ndị na-agba ụkwụ nwere nnukwu ụgbọala dị oke ọnụ na mpasa ụlọ ha na ụlọ.
Eziokwu Tomas Soucek:
Iji chịkọta akụkọ nwata anyị Tomas Soucek na akụkọ banyere ndụ ya ebe a bụ ihe amachaghị ma ọ bụ eziokwu dị oke egwu banyere onye na-agbachitere agbachitere.
Eziokwu # 1- Tomas Soucek Salary:
Nweta ego na paụnd ⟨£⟩
Inwe ego na Czech koruna (CZK)
Kwa Afọ € 3,585,360 $ 4,097,529 £ 3,260,281 95,508,066 CZK
kwa ọnwa € 321,530 $ 341,461 £ 271,690 7,958,755 CZK
Kwa Izu € 74,000 $ 78,678 £ 62,529 1,788,484 CZK
Kwa .bọchị € 10,571 $ 11,240 £ 8,932 255,497 CZK
Kwa elekere € 440 $ 468 £ 372 10,654 CZK
Kwa Nkeji € 7.34 $ 7.8 £ 6.2 177 CZK
Sekọnd € 0.12 $ 0.13 £ 0.10 2.9 CZK
Nke a bụ ihe Tomas Soucek eriterela uru kemgbe ị malitere ile Peeji a.
Eziokwu # 2- Fim ndị Tomas Soucek:
Soucek nwere ọkwa FIFA nke 2020 kwụ ọtọ na isi 81 dịka nke ọnwa Julaị. Agaghị ekwu na ọ bụ naanị obere oge tupu ọkwa ya na nke César Azpilicueta na Wilfred Ndidi bụ ndị a gbara asatọ.
Eziokwu # 3- Olee Okpukpe Tomas Soucek Na-eme?
Onye na-agba bọọlụ agbachitere agbabeghị azịza banyere nkwenkwe okpukpe ya na mgbasa ozi mmekọrịta, ajụjụ ọnụ na mpaghara egwuregwu. Ka o sina dị, ndị na-emegide ya nwere ike ịkwado ya ịbụ Onye Kraịst.
Eziokwu # 4- Trivia:
Know mara na afọ ọmụmụ Soucek - 1995 dị mkpa maka ọtụtụ isi ọganiru na teknụzụ ntụrụndụ? ọ bụ n’afọ ahụ ka a mara ọkwa DVD optical diski media media. Na ntụrụndụ, 1995 bụ afọ nke ihe nkiri dika Pocahontas na Batman kụrụ cinemas.
Eziokwu # 5- Wiki:
Aha n'uju Tomas Soucek
aha otutu Suk
Ụbọchị ọmụmụ Thbọchị 27 nke Mach 1995
Ebe amụrụ onye Havlíčkův Brod na Czech Republic
Egwuregwu Agbachitere Midchester
enyi nwanyị Natalia
Children Terezk (nwa nwanyị)
Net bara uru N / A
Daalụ maka ịgụ edemede a nwere nghọta na akụkọ ndụ Tomas Soucek. Anyị nwere olile anya na ide ihe mere ka ị mata n'eziokwu na ọ tozuru oke nlebara anya maka ndọrọndọrọ ọ rụgoro na football.
Na Lifebooger, anyị na-anya isi na anyị na-ebuga ihe ziri ezi na ezi bios. Ọ bụrụ n ’ị hụrụ nkwupụta okwu ma ọ bụ nkwupụta adịghị mma n’oge ị na-aga n’ihu, biko mee nke ọma ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụ hapụ nkọwa.
Njirimara Foto Njirimara: Tomáš Souček na EURO 2020 ruru eru Roch Czech Republic-Montenegro site Tadeáš Bednarz Enwere ikikere n'okpuru Ihe ndi okike CC BY-SA 4.0.